5 Kuhle Amadolobha Ukuze Vakashela Ukuze Thanksgiving EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Amadolobha Ukuze Vakashela Ukuze Thanksgiving EYurophu
Thanksgiving kuye kwaba iholide bendabuko kakhulu ehamba izungeze umkhaya njalo, igalikuni, futhi football. Nokho, labo phakathi kwenu abakujabulelayo ukuhamba futhi abangasebenzisa indlela esheshayo yokuphunyuka kufanele bacabangele ukuchitha isikhathi samaholide salo nyaka kwenye yalezi Zindawo Ezihamba Phambili Ukuvakashela i-Thanksgiving eYurophu.
Leli zwekazi ubudala ine Amadolobha Kuhle ukuba Vakashela i-Thanksgiving. Yize sonke nezwekazi laseYurophu iyamangalisa, kuphela ambalwa akhethiwe amadolobha fabulous ngobuqotho ukuvakashela i-Thanksgiving.
Europe ngokuvamile wawugcwala kakhulu ezivakashini, kodwa umuntu Awukwazi ukusho okufanayo ngasekupheleni kuka-November. Yingakho le ngxenye yonyaka yisikhathi esifanele sokuvakasha amadolobha asendulo bese wenza kabusha amasiko okubonga ngokudla okuhle nemibala yokuwa emangalisa.
Kungakhathaliseki uku American noma European, Kuloluhla lwezinto ezilandelayo, amadolobha kufanele kube izindawo zakho phezulu ku nasemaceleni Thanksgiving.
Ukuze Qala uhambo lwethu Best Amadolobha Okuthakazelisayo Ukuwavakashela for Thanksgiving thina abelethwe – esetshenziswa, Belgium
Ukuyibeka okufutshane, Bruges yidolobha yangempela imilingo eza ngqo kusuka ezinye Fairytale ubudala. Ngokwemvelo, edolobheni elidala yilapho bonke ubuhle amanga. Kuziwa ngokuqondile kusukela enkathini Medieval, futhi lapha uzothola eziningi izakhiwo zasendulo futhi mesmerizing.
Ungakwazi ukugibela isikebhe ngokusebenzisa emiseleni edolobheni sika ngiyaphupha futhi ngibuke ngokumangala nhlobo izakhiwo amahlamvu ambozwe. Yini enye, ngoba kungcono Novemba, konke kubukeka dreamlike esengeziwe ngenxa zonke enhle ukuwa imibala.
Awukwazi ukuya engalungile ngokuvakashela Bruges okwesikhathi Thanksgiving eYurophu. Ungakwazi nasezinganeni hop isitimela kule edolobheni ukwenza wonke isipiliyoni xaxa Amazing! futhi siyaqiniseka ngokushesha nje lapho uqeda iholide lakho, uzokwabelana lokhu 5 Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Ukuwavakashela for Thanksgiving eYurophu iposi blog.
Rotterdam ukuze Bruges Izitimela
Utrecht ukuze Bruges Izitimela
The Hague ukuze Bruges Izitimela
Norway ikude enyakatho abandayo, kodwa Oslo kuyinto okujabulisayo kuleli izingxenye eseningizimu yaleli zwe. Ngakho lo muzi kufanele ube yilokho ofuna ephelele kulabo abathanda kubanda kodwa namanje awukwazi ukuthatha imikhuhlane ukuqhaqhazela of Norway.
Oslo kuyinto obumangalisayo ngempela kule ngxenye ngonyaka ngenxa zonke ukuwa imilingo kwenkundla. plus, uthola ukubona Northern Lights zazo ukubonile arcade kuleli lizwe, ngakho yini kangcono umuntu kudingeka?
Ungase uthole bendabuko Thanksgiving uhlobo ukudla ozijwayele, kodwa isipiliyoni uthola ukuba ingaphezu kunomvuzo. Yize imenyu akuyona labamihibahiba ongafuna, the baseNorway kusadingeka eningi ukudla okuthakazelisayo ukunikela. Ngokwesibonelo, ngemuva kuyinto bendabuko hotdog Norwegian. Nokho, ukuthi kuphekwe yenkomo isitokwe futhi zihambisana lefse, a flatbread ezenziwe ngofulawa, izambane, nobisi.
Kusukela emangalisa nasemapaki omphakathi nezinqaba ubudala kuya Viking iminyuziyamu, uzoba eningakwenza Oslo. Siyaqiniseka ukuthi ungafuna ukusebenzisa imali engaphezu kwaleyo ezinsukwini ezimbalwa kuleli dolobha elihle ngokubabazekayo.
I-Oslo ikhetho lethu elisenyakatho kakhulu 5 Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Ukuwavakashela for Thanksgiving eYurophu.
Awukwazi mhlawumbe weqa London. Wonke umuntu oye wezwa kuBaba futhi ngakho, futhi wonke umuntu othanda ke. Yini ngcono nakakhulu, uzoba ukuthandana nalo ekwindla. Umuzi omkhulu, kodwa ukuba khona kule offseason kuyisikhathi ephelele ukuvakashela ezinye ngokuvamile izindawo eziminyene.
Inala izenzakalo kwenzeke ngalesi sikhathi sonyaka, ngakho uma ngabe imisebenzi fan, ozokuthanda London. Ngaphezu kwalokho, amapaki ekwindla zingaphezu ezimangalisayo. Kensington Gardens, Greenwich Park, futhi Windsor Omkhulu Park ezinye eziningi imvelo amazulu uzoba ufisa ukuvakashela.
Labo kini ukuthi cabanga ukudla ukuba yingxenye ebalulekile Thanksgiving, uzoba nesabelo sakho esifanele eLondon. Ukudla yesehlakalo lapha umxhwele futhi zihluke njengayo emuva omunye emadolobheni amakhulu e-United. Kuzoba okuthile ukunambitheka wonke umuntu.
Ingxenye best ukuthola ithuba lokuya eLondon wukuthi kukhona abaningi abadumile kolayini isitimela ukuthi uhambe lisuka ezwekazini Europe eLondon, efana naleyo eyabhalwa kusukela Amsterdam, Paris, futhi Berlin, konke okuyizinto ngesipiliyoni omangalisayo ubuke emaphandleni bese edabula Eurotunnel ngaphansi kwe-English Channel noma njengoba French ukuyibiza - La Manche.
Ngokuqinisekile ukwazi Switzerland, futhi izintaba imilingo, kodwa kungenzeka kakhulu ukuthi wezwa mayelana Lugano. Kuyinto idolobha langa eningizimu Switzerland, eduze komngcele Italy.
Umuzi ogwini esiluhlaza mesmerizingly echibini ezansi kwezintaba zase-Alps, ezwakala cishe imilingo. Lelo qiniso kuphela kufanele kube ngokwanele ukuze ukuchitha Thanksgiving yakho eYurophu khona lapho, I-Lugano ukukhetha kwethu okuhlukile kakhulu emadolobheni ahamba phambili wokuvakashela i-Thanksgiving.
Ngaphezu kwalokho, beya futhi bebuya kuleli dolobha nge isitimela kuyinto yesiteleka ngokwa. Yilokho Cishe indlela engcono kakhulu ukujabulela ubuhle omunye ezifundeni emangalisa kakhulu eYurophu. Ngaphezu kwalokho, uyophila uhambo ngenxa izitimela kumnandi ngokwabo, njengoba Okhahlamba babe omunye izitimela kakhulu izinga eYurophu.
Basel ukuze Lugano Izitimela
Bern ukuze Lugano Izitimela
Lucerne ukuze Lugano Izitimela
Zurich ukuze Lugano Izitimela
Asinakukwazi ukukhokhela ukweqa edolobheni kwaphakade izibani. Paris uhlale elinye lamadolobha wavakashela kakhulu emhlabeni ngesizathu. Nokho, ukuthi ngokuvamile indlela kakhulu aminyene yingakho ngasekupheleni November abe yisikhathi ephelele ukuvakashela. plus, ngeke khumbulani spellbinding ukuwa imibala.
Yini enye, Paris ngoNovemba kuyinto eliyipharadesi Instagramers. Ngeke ukwazi ukuyeka ukuthatha izithombe ngenkathi ulapha. Okungenani, oluzoqinisekisa ukuthi uthola uhambo okuyinto uzoba ukukhumbula phakade.
Kepha ukudla, kahle, wazi kangakanani eFrance; futhi ngaphandle, Paris iyona ukudla inhlokodolobha emhlabeni. Recreating a Thanksgiving Ngaleyo ndlela, uyokwazi lula kakhulu, futhi uzothola ithuba ukwengeza ukuvuleka kuso. Ngeke ukwazi ukwenza lokho kwenye. kuphela Paris inganikeza ukudla kanye indawo ezokwenza eyayingashaqisa ngisho isihambi pickiest.
Into kuphela ongayenza ngcono adventure ukuze sikhwele isitimela uhambe emaphandleni French. Kuzoba umuzwa omuhle kakhulu!
Chitha Kuhle Thanksgiving ekupheleni Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Ukuwavakashela for Thanksgiving eYurophu
Asikwazanga baqhubekele phambili ku ukhuluma ngani le mizi. Ngaphezu kwalokho, asikwazanga ngikuxoxele nakwezinye izindawo ukuthi simelwa ukusekelwa yakho emhlabeni Thanksgiving. Yonke esifundeni Bavarian ka Germany, le Inyakatho ye-Italy nge Milan ikakhulukazi, Scotland, nokunye okuningi. Thanksgiving eYurophu kungaba isenzakalo esimnandi iyiphi yalezi zindawo.
Noma ngabe unquma ukuya ekugcineni, kufanele ucabangele ehamba ngesitimela. Thanda sishilo izikhathi eziningi, ezinye zalezi zindawo ngeke akunike isipiliyoni ngobuqotho ngokuphelele ngaphandle kokuthi sibavakashele ngesitimela. ngaleyo ndlela kuphela ukwazi ubona umlingo wama-Europe ngempela. Xhumana Londoloza Isitimela ukuthola amathikithi akho ngokushesha okukhulu ngoba i-Thanksgiving isicishe yafika!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
europetravel London longtrainjourneys Thanksgiving Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela imvuenline travelfrance hamba travelswitzerland